बच्चा मोटोघाटो देख्दा खुशी हुने कि दु:खी? - Health TV Online
एजेन्सी 33 Views
बच्चा मोटोघाटो देख्दा खुशी नहुने अभिभावक को होला र! बच्चा कमजोर होलान् भनेर धेरैभन्दा धेरै खानेकुरा ख्वाउने गरेको देखिन्छ।
उनीहरूलाई बिहान उठेदेखि बेलुकी सुत्ने वेलासम्म पटक पटक ख्वाइन्छ। घरका खानाबाहेक चाउचाउ, चाउमिन, चिजबल, चकलेट, मम, पिज्जाजस्ता खानेकुरामा जोड दिइन्छ।
खानाअनुसार उनीहरूलाई शारीरिक परिश्रम पर्दैन। धेरै समय स्कुलमा बिताउँछन्। घर फर्केपछि होमवर्क। त्यसपछि कम्प्युटर, मोबाइल र टेलिभिजन।बाहिरी खेलहरू खेल्दैनन्। एकोहोरो खाना त्यसमाथि घरभित्र मात्रै रहने भएकाले उनीहरू मोटाउँदै गएका छन्।
अहिलेका बच्चाहरू मोटाउने प्रमुख कारण शारीरिक निष्क्रियता र भनेको जंकफुड हो। आमाबुवाले बच्चाको खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। घरबाहिरको खानामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चाउचाउ, चिजबल, बर्गर, पिज्जा, मम, चाउमिन जस्ता बजारका खानेकुरा दिनुहुँदैन। सम्भव भएसम्म घरमै बनाएर दिनुपर्छ।